सन्तोष घिमिरे - | Nagarik News - Nepal Republic Media
सन् २००६ देखि पत्रकारितामा सक्रिय घिमिरे कुटनीति तथा अन्तराष्ट्रिय सम्वन्धमा कलम चलाउँछन्।
सन्तोष घिमिरेका लेखहरु :
किन नेपाल आउँदैछिन् बेल्जियमकी राजकुमारी ?
बेल्जियमकी राजकुमारी एस्ट्रिड नेपाल भ्रमणमा आउन लागेकी छन्। परराष्ट्रमन्त्रालयका अनुसार उनी एक साता लामो भ्रमणका लागि आइतबार नेपाल आउन लागेकी हुन्।
सन्तोष घिमिरे १ माघ २०७६ बुधबार २ मिनेट पाठ
भारतका पूर्व रक्षामन्त्री जर्ज फर्नानडिजको ८८ वर्षको उमेरमा मंगलबार निधन भएको छ। दिल्लीको एक अस्पतालमा उपचारको क्रममा उनको निधन भएको हो। उनका भाइ माइकल फर्नाडीजका अनुसार जर्ज फर्नानडिजलाई स्वाइन फ्लु भएको थियो।' उनको नेपालका नेताहरुसँग समेत निकट सम्वन्ध थियो। उनले नेपालबारे चासो राख्थे। नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा फर्नान्डिजको सहानुभुति थियो। नेपाली नेताहरुसँग दिल्ली र काठमाडौंमा भेटिरहेने उनी हक्की स्वभावका थिए।
सन्तोष घिमिरे र प्रशान्त लामिछाने १५ माघ २०७५ मंगलबार ८ मिनेट पाठ
डाभोसमा किन फितलो भयो ओलीको प्रस्तुती ?
स्वीजरल्याण्डको डाभोसमा जनवरी २२ देखि २५ सम्म आयोजित विश्व आर्थिक मञ्चको ४९ औं वार्षिक बैठकबाट प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली शनिबार बिहान फर्किए। भिन्न भिन्नै सत्रमा ओलीले मुलुक लामो राजनीतिक संक्रमणकाल पछि स्थिरताको बाटोमा हिडेको बताए।
सन्तोष घिमिरे १२ माघ २०७५ शनिबार ११ मिनेट पाठ
सन्तोष घिमिरेका अरु समाचारहरु खोज्नुहोस्